Soomaali / Helidda Cuntada inta ay Iskoolladu la Xiran yihiin COVID-19 Dartiisa
Isbedellada adeegga cuntada laga billaabo 2021
Maaddaama Saint Paul Public Schools loo beddelayo waxbarashada ay iskoolka imaanayaan ardayda qaarkood, adeeggayaga cuntada ayaa sidoo kale is beddelaya. Hadday ardaydaadu shakhsi ahaan waxbarashada iskoolka u imaanayaan ama haddii iyagoo gurigooda jooga ay duruusta qaadanayaan, waxay sii wadi karaan inay helaan quraac iyo qado bilaash ah inta sannad-dugsiyeedka ka hartay.
Cuntada Ardayda laga Siinayo Iskoollada
Quraac bilaash ah iyo qado ayaa la siin doonaa dhammaan ardayda inta lagu jiro waxbarashada shakhsiga ah ee iskool kasta ka socoto. Tan waxaa ka mid ah ardayda goobta jooga ee shakhsi ahaanta u helayo caawinaad waxbarasho. Liiska noocyada cuntada ayaa laga heli karaa halkan: schoolcafe.com/spps.
Wixii xog intaas ka badan oo ku saabsan sida cuntada loo bixin doono loona cuni doono markay ardaydu ku noqdaan dugsiga, booqo spps.org/reopen.
Cuntada baakadeysan ee caruurta loogu talogalay waxaa laga soo qaadan karaa in ka badan 50 iskoollo oo ku yaalla degmada Saint Paul. Goobo dheeraad ah ayaa lagu soo dari doonaa laga billaabo March 8. In horey loo sii dalabado cuntada ayaa la iska doonayaa si iskoolladan looga soo qaato. Fadlan isticmaal arjigaan si aad horey ugu sii dalbatid cuntadaada baakadeysan.
Cuntada baakadeysan ayaa loo heli karaa carruur kasta oo ah 18 jir ama ka yar, iyo weliba kuwa naafada ah ee hadda ku qoran barnaamijka iskoolka. Carruurtu uma baahna inay goobjoog ahaadaan si looga qaado cuntada. Fadlan xusuusnow inaad ku dhaqantid kala fogaanshaha dadweynaha (ka fogow ugu yaraan 6 tallaabo dadka kale) oo xiro gafuur-xir marka aad cuntada qaadanayso.
Halkan guji si aad u aragtid liiska dhammeystiran ee goobaha cuntada laga qaato iyo jadwalka xilliyada la qaadanayo
Buuxi foomkan haddii aad rabtid inaad joojisid, ama beddeshid meesha aad cuntada ka qaadatid, ama tirada cuntada baakadeysan.
Codsiga Keenidda Cuntada Baakadeysan
Fadlan buuxi foomkan si aad u codsato cuntada guriga la keenayo haddii aadan awoodin inaad cuntada soo qaadatid sababo caafimaad ama gaadiid awgood.
GOOBAHA JAALLIYADEED EE CUNTO LAGA HELI KARO
Haddii aad tahay dagane Gobolka Ramsey oo ay ku saameysay cudurka safmarka COVID-19, waad u qalmi kartaa inaad heshid cuntooyin diyaarsan in lagu gaarsiiyo gurigaaga si bilaash ah.
Magaalada Saint Paul
Waxay magaalada City of Saint Paul wadashaqeyn la sameynaysaa ururada Youthprise, Arts-Us, iyo Sanneh Foundation si ay cunto bilaash ah u siiyaan qoysaska u baahan. Qoysaska ay guriga u joogaan caruur ka yar 18 jir waxaa loo oggol yahay inay hal baakad oo cunto ah u qaadaan cunug walba toddobaadkii. Baakad walba oo cunto ah waxaa ku jiro cunto lagu casheeyo toddobo habeen iyo cunto fudud.
YMCA ku yaallo farasmagaalka St. Paul, Midway, Eastside, Inver Grove Heights iyo Maplewood waxaa laga helayaa cunto bilaash ah oo qoyska loogu talo galay Isniinta ilaa Jimcaha, 12 p.m. - 1 p.m. inta ay cuntadu taallo.
Goobaha West 7th iyo Eastside waxaa laga helayaa cunto baakadeysan oo bilaash ah Isniinta ilaa Jimcaha, saacadaha 10 a.m.- 4 p.m.
Cunto ah guro-oo-qaado ayaa la bixiyaa Isniinta ilaa Jimcaha saacadaha 1-4 p.m.
Geli lambarka boostada ee aagga aad deggan tahay (zip code ) si aad u ogaatid meelo kuu dhow oo laga bixiyo cunto.
Wac 888-711-1151 si aad u heshid xogo quseeyo meelaha laga helo cuntada, Isniinta ilaa Jimcaha saacadaha 10 a.m.-5 p.m.